Fanemorana ny kabary amin'ny ankizy | Bezzia
Maria Jose Roldan | 04/06/2021 23:14 | Ho an'ny zanakao lahy
Ny zavatra ratsy indrindra azon'ny ray aman-dreny atao dia ny mampitaha ny zanany amin'ny hafa. Ny lohahevitry ny kabary dia iray amin'ireo mahazo fampitahana indrindra ary maro ny ray aman-dreny tsy manam-paharetana amin'ny teny voalohany ananan'ny zaza.
Mifandray amin'ny fiteny, mipoitra ny fisalasalana amin'ny karazana rehetra, indrindra ireo mifandraika amin'ny fotoana tokony hanombohan'ilay kely miteny ary raha misy ny manahy raha tsy manao izany amin'ny taona iray izy.
1 Mila ny fotoanany ny ankizy tsirairay
2 Amin'ny fotoana inona no mety hisy ny olana amin'ny kabarin'ny zaza
3 Fomba entina manentana ny ankizy hivoatra amin'ny fiteny
Mila ny fotoanany ny ankizy tsirairay
Tokony hazava tsara ny ray aman-dreny fa tsy ny ankizy rehetra dia mitovy mila ny fotoanany ny tsirairay rehefa hianatra ilay fiteny. Marina fa amin'ny vanim-potoana iray dia tokony hiteny ny ankizy rehetra tsy misy olana ary raha tsy izany dia mety hijaly kely ny zaza amin'ny fampivoarana ny kabary.
Toy ny fitsipika ankapobeny, ny zaza dia tokony hilaza ny teny voalohany amin'ny taona iray. Rehefa afaka 18 volana dia tokony hanana voambolana manodidina ny 100 ny zanaky ny zaza. Rehefa tonga eo amin'ny roa taona, dia mampanan-karena ny voambolana ary ny zaza dia tsy maintsy efa manana teny mihoatra ny 500 rehefa miteny. Ara-dalàna izany, na dia mety misy aza ny ankizy izay tsy ampy ny voambolana ary vitsy ny teny.
Amin'ny fotoana inona no mety hisy ny olana amin'ny kabarin'ny zaza
Mety misy fahatarana sasany amin'ilay fiteny, rehefa ny zaza rehefa mahatratra roa taona dia tsy mahay mampifandray teny roa. Misy fambara hafa afaka manaitra anao amin'ny olana amin'ny fiteny lehibe:
Amin'ny telo taona ny zaza dia manao feo mitokana nefa tsy hainy ny milaza teny sasany.
Tsy afaka mampifandray teny mamorona fehezanteny.
Tsy manana fahaizana manonona sy mahay manahaka ihany izy.
Zava-dehibe ny manondro amin'ny ray aman-dreny fa amin'ny ankamaroan'ny tranga ny fahatarana dia mazàna mandeha ara-dalàna mandritra ny taona maro.
Fomba entina manentana ny ankizy hivoatra amin'ny fiteny
Manoro hevitra ireo matihanina amin'ny sehatra hanaraka andian-torolàlana ahafahan'ny ankizy mampivelatra ny fiteniny amin'ny fomba mahomby sy mety:
Tsara ho an'ny ray aman-dreny ny mamaky amin'ny zanany tantara na boky amin'ny fomba mahazatra.
Lazao mafy ny fihetsika samihafa tokony hatao ao an-trano.
Avereno ny teny izay ampiasaina isan'andro.
Soso-kevitra ny hanokana fotoana kely amin'ny lalao fanabeazana izay fiteny na kabary dia manana andraikitra voalohany.
Raha fintinina, ny resaka kabary dia iray amin'ireo izay mampatahotra ny ray aman-dreny matetika. Ny fahitana ny fomba ahaizan'ny ankizy hafa miteny ny teny voalohany amin'ny taona iray ary tsy ny zanakao, dia mampatahotra ny ray aman-dreny maro. Tadidio fa mila ny fotoanany ny ankizy tsirairay, noho izany dia mila sorohinao ny fampitahana. Betsaka ny ankizy nahemotra raha miresaka, fa rehefa mandeha ny taona dia lasa ara-dalàna ny fitenin'izy ireo ary mahavita miteny tsy misy olana izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » RENY » Ho an'ny zanakao lahy » Faharetan'ny kabary amin'ny ankizy